WARBIXIN: Maxaa ka jira in Lionel Messi uu ka laabanayo go’aankii uu uga fariistay ciyaaraha Caalamiga ah?… (Madaxweynaha Argentina iyo Maradona oo ka qayb galay Mudaaharaad lagu dalbanayo in Messi ku soo laabto xulka) + Sawirro – Gool FM
Koox weyn oo England ah oo ku biirtay liiska kooxaha ku dagaalamaya saxiixa Erling Haaland
WARBIXIN: Maxaa ka jira in Lionel Messi uu ka laabanayo go’aankii uu uga fariistay ciyaaraha Caalamiga ah?… (Madaxweynaha Argentina iyo Maradona oo ka qayb galay Mudaaharaad lagu dalbanayo in Messi ku soo laabto xulka) + Sawirro
(Buenos Aires) 04 Luuliyo 2016 – Wararka ka imaanaya Waddanka Argentina ayaa waxa ay sheegayaan in Lionel Messi uu go’aansaday inuu dib ugu soo laabto xulka Argentina, kaddib markii uu dhawaan shaaciyey inuu ka fariistay ciyaaraha caalamiga ah.
Jariiradda La Nación ee ka soo baxda dalka Argentina ayaa dad aad ugu dhow dhow Lionel Messi waxa ay u sheegeen in Messi uu ku soo laabanayo xulka, isla markaana uu dib uga laabtay go’aankiisii hore ee uu kaga baxay ciyaaraha caalamiga ah.
Waxa ay Jariiraddu intaas ku sii dartay warbixinteeda in Lionel Messi uu hadda qaadanayo uun nasiino, laakiin hadafkiisa ugu wayn uu yahay inuu ka qeyb galayo Koobka Adduunka ee sanadka 2018 lagu qaban doono dalka Ruushka.
Dhinaca kale Madaxweynaha Waddanka Argentina iyo Diego Maradona ayaa ka qayb galay Mudaaharaad ay dadka reer Argentina ku dalbanayeen in Messi ku soo laabto xulka.
Iyadoo uu roob ka da’ayay Caasimadda Waddanka Argentina ee Buenos Aires ayaa waxaa halkaasi isugu soo baxay Boqolaal taageeryaal ah oo uu ku jiray Madaxweynaha dalkaasi Mauricio Macri kuwaasoo dalbanayay in Lionel Messi uu ka laabto go’aankii uu kaga fariistay xulka Argentina.
Waxaa la arkayay Madaxweyne Macri iyo xidiggii hore ee Argentina Diego Maradona oo ku dhex jira Dibadbaxayaasha isu soo baxay ee halku dhiggoodu ahaa ‘No te vayas Lio’ – ‘Lio, ha tegin’.
Weeraryahanka xulka Argentina iyo kooxda Barcelona Messi ayaa ku dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaaraha heerka caalami, kaddib markii xulkiisu ku guuldarreystay in uu ciyaartii kama dambeysta ahayd ee Copa America kaga guuleysto xulka Chile, waxaana kulankaasi kaddib uu Messi yiri: “Waxaan filayaa in ay tani tahay; way iiga dhammaatay xulka”.
Messi ayaa ku guul darreystay saddex jeer oo xiriir ah uu soo gaaray Final, koobkii adduunka iyo Copa America 2015 iyo 2016 taa oo keentay inuu si caro leh uga dhawaajiyo inuu xulka bis ka yahay kaddib rigoorooyinkii uu xulka Chile uga qaaday koobka labo sano oo xiriir ah.
Messi oo 5 jeer ku guuleystay Xiddiga ugu wanaagsan Dunida ayaa waxa uu ka qayb galay 3 ciyaar dhammaad oo Copa America ah 2007, 2015 iyo 2016, waxaa intaa u dheer in uu xulkiisa soo gaarsiiyay ciyaartii kama dambeysta ahayd ee Koobkii Adduunka 2014 ee Brazil.
Dawladii dhameyd ee Spain oo musuq iyo eex lagu helay: Real, Barca iyo kiiska oo baaritaano galay.....
WARBIXIN: BLAISE MATUIDI oo u soo duulay England si uu wada xaajood ula galo mid ka mida kooxaha ka dhisan Manchester...Waa tee?